A tọhapụrụ PowerDNS Recursor 4.4, chọpụta ihe dị ọhụrụ | Site na Linux
Versiondị ọhụrụ nke A tọhapụrụ PowerDNS Recursor 4.4 na mbipụta ọhụrụ a abịa na nkwado maka DNS64 nke na-enye ohere ịmepụta ihe ndekọ AAAA IPv6, mgbanwe ọzọ dị iche bụ ikike ịgbakwunye aha RPZ, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Maka ndị na-amaghị PowerDNS, ị kwesịrị ịma na nke a bụs maka recursive aha mkpebi. Onye nrụpụta PowerDNS ọ dabere na otu koodu ntọala dị ka PowerDNS Server ikike, ma PowerDNS Recursive na Authoritative DNS sava webata site na mmepe mmepe dị iche iche ma wepụta ya dị ka ngwaahịa dị iche iche.
Ihe nkesa ahụ na-enye ngwaọrụ maka nchịkọta ọnụ ọgụgụ dịpụrụ adịpụ, na-akwado ntigharị ngwa ngwa, nwere injin arụnyere maka ijikọ ndị ọkwọ ụgbọ ala n'asụsụ Lua, na-akwado DNSSEC, DNS64, RPZ (mpaghara iwu azịza), ma na-enyere ndepụta aka. oji.
Mkpebi mkpebi ahụ nwere ike ịdekọ dị ka faịlụ mpaghara BIND. Iji hụ na arụmọrụ dị elu, a na-eji usoro ọgbara ọhụrụ eme ihe na njikọ multiplex na FreeBSD, Linux, na Solaris (kqueue, epoll, / dev / poll), yana onye nyocha ihe nchịkọta DNS dị elu nke nwere ike ịhazi ọtụtụ iri puku ihe ndị yiri ya.
1 Main ọhụrụ atụmatụ nke PowerDNS Recursor 4.4
1.1 Nweta PowerDNS Recursor 4.4
Main ọhụrụ atụmatụ nke PowerDNS Recursor 4.4
Dị ka anyị kwuru na mbido, ụdị ọhụrụ a bịara na Nkwado DNS64 a yã́ p⁇ ́ kú a guu, asa a gbãa Lua. DNS64 na - enye gị ohere ịmepụta ihe ndekọ AAAA IPv6 na - akpaghị aka dabere na IPv4 A records, yana IP6.ARPA CNAME nkanka maka IN-ADDR.ARPA dị.
Ọzọkwa, enwere ike itinye mkpado aka ike na RPZ (Nzaghachi Iwu Zones, na-ahapụ gị gbakọọ "aha" nke aha DNS site na iji DNSBL myirịta iji lụsoo ndị agha ọgụ site na spammers na scammers.)
Ọzọ nke mgbanwe na ike na-ike dị A na-agbakwunye ndenye ego RPZ na ndị agha akọwapụtara site na mkpebi CNAME, na mgbakwunye na ozi gbatịrị agbatị gbasara nhazi RPZ, nke egosiri n'oge nsuso, debe ya na ndekọ, wee gafere na edemede na Lua.
A na-ekerịta ihe ederede ederede na eri dị iche iche.
A na-enyefe rogoTag na koodu Lua, nke enwere ike iji dị ka igodo ọzọ na oghere ntinye karịa nkpuchi subnet nke EDNS.
E mejuputara usoro nke abụọ nke Proxy protocol, nke na-enye ohere mgbanwe nke ozi gbasara adreesị onye ahịa (dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-eji dnsdist).
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele nkọwa nke ntọhapụ ọhụrụ a na esonụ njikọ.
Nweta PowerDNS Recursor 4.4
Maka ndị gị nwere mmasị ịnweta PowerDNS Recursor 4.4, ị kwesịrị ịma na koodu isi dị na GitHub.
Iji nweta koodu ahụ, mepee ọnụ na pịnyere iwu na-esonụ:
Ebe nchekwa a nwere isi mmalite maka PowerDNS Recursor, PowerDNS Authoritative Server, na dnsdist (onye na-edozi DNS dị ike). Ha atọ nwere ike wuru site na ebe nchekwa a.
Versionsdị nsụgharị dị iche iche nwere ike wuru site na enyemaka nke pdns-builder, nke na-eji usoro nrụpụta dabere na Docker. Iji malite na nke a, gbasoo iwu ndị a na mgbọrọgwụ nke nchekwa a:
N'ihe banyere ndị bụ ndị ọrụ Ubuntu, ha nwere ike ịrụ ọrụ ahụ site na iji kọmputa ede iwu ndị a:
Na ichikota uzo di ocha, jiri:
N'otu ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ịkpọ akwụkwọ ahụ wee nweta ihe ngwungwu PowerDNS (deb na rpm) nke dị na ebe nchekwa koodu ngwanrọ. Ha nwere ike ịkpọtụrụ ya site na ịga na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » A tọhapụrụ PowerDNS Recursor 4.4, mara akụkọ ya
Ndị ọrụ iwe na-erikpu Github na koodu Youtube-dl